Ciidamada Xoogga dalka oo Xorreeyey deegaano horleh oo Gobolka Sh/hoose katirsan | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Ciidamada Xoogga dalka oo Xorreeyey deegaano horleh oo Gobolka Sh/hoose...
Ciidamada Xoogga dalka oo Xorreeyey deegaano horleh oo Gobolka Sh/hoose katirsan
Ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, ayaa howlgallo ka dhan ah maleeyshiyada argagixisada ah ee Al-shabaab ka wada qeybo ka mid ah Gobolka shabellaha hoose, iyagoo ku xorreeyey deegaano hor leh oo gobolkaaasi katirsan.
Degaano hoos yimaada degmadda Kuntunwaareey ayey ciidamada xoogga ka xorreeyeen Nabad diidka Alshabaab, waxaana deegaanadaas argagixisada ay ku dhibaateen jireen dadka shacabka ah, waxayna ku qasbi jireen inay keenaan dhalinyaro u dagaalanta kooxda iyo in aysan jari Karin geedka Soomaalida ay u taqaan cali garoobka oo wadooyinka deegaanada la xorreeyey xiray, dhibaatana bulshada ay ku qabeen.
Taliyaha ururka 26 aad ee guutada seddaxaad Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, Gaashaanle sare Xasan Maxamed Abuukar (Jaamici) oo la hadlay Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed ee SONNA, ayaa u sheegay in gacanta Nabad diidka Alshabaab ay ka bixiyeen deegaano hoos yimaada degmadda Kuntunwaareey ee Gobolka shabellaha hoose, islamarkaana ay qabteen tiro Maleeshiyaad oo Kooxda u dagaalameysay.
Col Xasan Jaamici, ayaa sheegay in howlgalada Nabad diidka lagula dagaalamayo ee gobolka Sh/hoose ka socda ay noqon doonaan kuwa joogta ah, dhowaanna lasoo afjari doonno howlgaladaasi, isagoo shacabka ugu baaqay in Ciidamada ay kala shaqeeyaan siddii Alshabaab looga xoreyn lahaa deegaaanada tirada yare ee hadda ay ku dhuumanayaan.
Previous articleWasiirka Maaliyadda”Dhawaan Miisaaniyadda dowladda 2018 waxaa la horgeynayaa Golayaasha Wasiirad iyo XFS”
Next articleWasiirka Maaliyadda”Dhawaan Miisaaniyadda dowladda 2018 waxaa la horgeynayaa Golaha Wasiirada iyo Baarlamanka”